ချစ်ကြည်အေး: ဘာလီ ခရီးစဉ်-၂
Anonymous Wed Mar 31, 11:15:00 PM GMT+8
TZA ကတော့ နာမည်ကျော်နေပ့ါလား မမကတော့ ရေးချလိုက်ပြန်ပြီ ဟိုကငိုတော့မယ်
ဝက်ဝံလေး Thu Apr 01, 12:06:00 AM GMT+8
ဒီကိုလာပါ ဒီကိုလာပါ နဲ့ခေါ်နေတာ အခု အဲလိုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးလား မချစ်ရေ ဟီးးးးးး
ဟုတ်ပါ့ ဘလော့ဂ်ဂါကိုလာနှပ်ရတယ်လို့ ဒီတကစီ သမားနှယ် အခုတော့ ပို့စ်ဖြစ်ပြီ ဟားဟားးးး ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီ တက္ကစီ သမားပုံတောင် ရိုက်ပြီး တင်သင့်တယ် ဟဲဟဲ မြှောက်ပေးလိုက်ပြီနော် ဆက်သာလုပ်တော့ မချစ်ရေ ခွီးးးးးးးးးး
ဝက်ဝံလေး Thu Apr 01, 12:07:00 AM GMT+8
ဘာလီမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွတယ်ထင်တယ် ဟုတ်လား မြန်မာနိုင်ငံလဲ အဲဂလိုမျိုး အားကျတယ် ထင်ပါ့ ဟက်
လုလု Thu Apr 01, 12:25:00 AM GMT+8
ဘာလီခရီးစဉ်ကိုလည်း အားကျမိရုံတင်မက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ညနေစာ ချက်စားတာကိုပါ အားကျသွားတယ်။ ချဉ်စော်ကားသီးလေးပါ ပြထားတော့ ပိုပြီး အားကျသွားပြီနော်။
မြစ်ကျိုးအင်း Thu Apr 01, 02:05:00 AM GMT+8
ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဝယ်တိုင်း ဈေးနှုန်းပြောရတာ အားရစရာကြီး
ပထမဆုံး ပန်ချီကားလေး ကြိုက်တယ်
♥ကိုဇော်♥ Thu Apr 01, 06:06:00 AM GMT+8
ပန်းချီကား သုံးကားလုံး ခိုက်တယ်ဗျာ. . လက်ဆောင်ပေး :P
အဲဒီစားစရာကတော့ ဒီမှာ လမ်းဘေး Stream Food ဆိုပါစို့။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကင်သဗျ. . . ၊ ဒီမှာတွေက ပြုတ်သဗျ. . .
ကျနော်ကတော့ ကြုံရာ စားသဗျ. . .
ချဉ်စော်ကားသီးက ဘယ်လို လုပ်စားရတာတုန်းဗျ..
Thant Thu Apr 01, 09:39:00 AM GMT+8
အပေါ်ဆုံးက ပန်းချီကား လက်ဆောင်ပေးမလား..... :D
ဒဏ္ဍာရီ Thu Apr 01, 09:53:00 AM GMT+8
ဘာလီတင်ဟုတ်ဘူး မမရေ.... စလုံးမှာလည်း လူလည်ကျတယ်နော်။ ရောက်ခါစက china towm mrt ကနေ city hall ကို $18 ကျပ်ပေးပြီး စီးလိုက်ရဘူးတယ် (ကိုယ်တွေ့)း)) အဲတုန်းက ဘလော့်မရေးသေးလို့ပေါ့ မမရယ်.. ဟွန့်ခုလိုမျိုးဆို ဘယ်ရလဲ..။း)
မမရဲ့ ချစ်ချစ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုပေးမယ်။ ပန်းချီကားတွေ လှတယ်.. လိုချင်တယ်။ အမဲသားတော့ မစားတော့ သွားရည်မကျ... မမချက်တဲ့ ညစာကိုတော့ ငမ်းသွားတယ်။ ငါးပိလမ္မာချက်လေး စားချင်လိုက်တာ။
shwezinu Thu Apr 01, 11:15:00 AM GMT+8
ပန်းချီကား တော့ မခံစားတတ်ဘူး ထမင်းဝိုင်းလေးတော့ ခံစားသွားပါတယ်..
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Apr 01, 11:36:00 AM GMT+8
ဟင်းက အုန်းနို့များရင်တော့ ခပ်လန့်လန့်ပဲ၊ taxiသမားက လူကဲခပ်တော်ပါပေတယ်၊ အချဉ်ကိုအချဉ်မှန်းသိရှာတယ်
T T Sweet Thu Apr 01, 12:38:00 PM GMT+8
ဟီးဟီး ... ရှင်းရှင်းပြောရရင် အောက်ဆုံးက ထမင်းစားပွဲလေးကို ပိုကြိုက်တယ်။
ဘာလီ .. ဘာလီ ... ရောက်ဖူးအောင်သွားချင်သေးတယ်။
မြသွေးနီ Thu Apr 01, 04:08:00 PM GMT+8
ဟို Bakso ကလည်း စားချင်စရာကြီး။
ဇွန်မိုးစက် Thu Apr 01, 05:41:00 PM GMT+8
ပထမနဲ့တတိယပန်းချီကားတွေ ကြိုက်တယ်။ အောက်ဆုံးက ထမင်းဝိုင်းအကြိုက်ဆုံးပဲ။ ဂလု...ဂလု...:D
မောင်မိုး Thu Apr 01, 05:45:00 PM GMT+8
ပန်းချီကားတွေပဲ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့..အကျီင်္တွေကများလှချည်လား။ အနော်တို့အတွက် ခွဲတမ်းပါလားဟင်..။ ဟီး ရွေးဂေါက်ပွဲနီးလို့ လေသံတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပါ။
TZA Thu Apr 01, 09:25:00 PM GMT+8
ပန်းချီကားတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းပြောပြပါလား.. ဒီမှာအဆင်မပြေရင် မေးလ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပို့ပေးပါဗျာ။ တော်တော်လှတယ်။
ချစ်ကြည်အေး Thu Apr 01, 09:33:00 PM GMT+8
တီဇီးအာ...ပုံ ၁ က ရူပြား ၆၀,၀၀၀၊ ၂ နဲ့ ၃ က ၃၅,၀၀၀ စီ ပေးရတယ်...
တကယ်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင် ပေးချင်တာ...မသယ်နိူင်လို့...
May Moe Thu Apr 01, 10:07:00 PM GMT+8
Wow ! ပန်ချီကားတွေ တန်လိုက်တာ
khin oo may Fri Apr 02, 01:05:00 AM GMT+8
Moe Cho Thinn Fri Apr 02, 04:07:00 AM GMT+8
မမပို့စ်ဖတ်တာ ဘေးနား calculator ချထားရတယ် ဟားဟား၊
ပထမဆုံး ပန်းချီကားလေးကြည့်ရင်း ထမင်းဝင်တီးသွားပါကြောင်းး။ ။
အင်ကြင်းသန့် Fri Apr 02, 08:07:00 AM GMT+8
ပန်းချီကားလေးတွေကို ကြိုက်တယ်... ဟုတ်ပ မမရယ် ကိုမိုးပြောသလိုပဲ...အကျီင်္တွေက အများကြီးရယ် ... ခွဲတမ်းလေးများ ရမလားလို့ ဟီးးးးးးးးးးးး
အပြုံးပန်း Fri Apr 02, 09:16:00 AM GMT+8
rose of sharon Sat Apr 03, 09:22:00 AM GMT+8
ပန်းချီကားတွေအရမ်းကြိုက်တယ်... ဝါးပင်လေးတွေကိုပိုသဘောကျတယ်... အသက်ဝင်တယ်.... ချဉ်စော်ကားသီးဆိုတာမသိဘူးတော့.. ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး.... အ တာတွေပေါ်ကုန်ပြီ
ချစ်ကြည်အေး Sat Apr 03, 09:36:00 AM GMT+8
ချဉ်စော်ကားသီးက မန်ကျည်းသီးမှည့်နေရာမှာ အစားထိုးပြီး သုံးရတာပါ အရသာက ချဉ်ပြုံးပြုံးနဲ့...ဘာဟင်းချက်ချက် အချဉ်လေးကဲချင်ရင် ထည့်ချက်လိုက်တာပါပဲ...သူ့ချည်းပဲလည်း ဟင်းချိုချက်သောက်လို့ ရတယ် အသားတမျိုးမျိုးနဲ့ ရောပြီးတော့လေ....:)
(မောင်လေးကိုဇော် , မရိုစ့် နဲ့ ချဉ်စော်ကားသီး မသိသူများအတွက်)